Semalt: WordPress Themes sy Frameworks
Ho an'ny mpampiasa rehetra WordPress vaovao, ny fikasana hifidy lohahevitra iray dia matetika ny endrika miovaova. Tahaka ny amin'ny fomba mahazatra ampiasain'ny lohahevitra, ny fampiasana lohahevitra vaovao ho an'ny tranonkala vaovao dia mahatsapa tsara. Betsaka ny orinasa no mifidy ny sehatra an-tserasera ho toy ny fomba vaovao ara-barotra. Amin'ireny tranga ireny dia manapa-kevitra ny hitady hevitra tsara amin'ny WordPress ireo olona ireo. Amin'ny toe-javatra hafa, aleon'ny olona mampiasa ny lohahevitra noho ny olana eo amin'ny sehatra na ny olana amin'ny famolavolana. Ny olona iray dia afaka manaisotra ireo olana rehetra ireo amin'ny alalan'ny fisafidianana sy ny fampiasana ny WordPress mety tsara. Ny lohahevitra dia mora ampiasaina sy hampitombo. Ankoatra izany, ny mpampiasa dia afaka manampy ireo endri-javatra amin'ny fametrahana plugin plugin izay ahafahan'ny tranonkala manontolo mampiditra fepetra manokana
I Ivan Konovalov, manam-pahaizana manokana avy amin'ny Semalt , dia manome toky fa ny sehatra WordPress rehetra dia tsy mitovy. Misy lohahevitra samihafa izay natao ho an'ny vohikala sokajy samihafa. Ireo mpampiasa samihafa dia afaka manatanteraka sehatra samihafa amin'ny fampiasana lohahevitra samihafa. Anatin'ity fizarana ity, ireo mpampiasa vaovao dia manana fotoana sarotra amin'ny fisafidianana ny sehatra WordPress, na ny sehatra WordPress. Sarotra ny manapa-kevitra indrindra rehefa misy olona manana lohahevitra samihafa amin'ny fikarohany. Ankoatra izany, ny tranonkalanao dia mety ho lasa tranonkala fanoratana raha ny fampiasanao ny lohahevitra an-tsoratra. Ao amin'ny WordPress, misy toro-làlana mora entina hanaraka ny foto-kevitra hifidy amin'ny tanjona manokana..Mora ny mahatakatra ny fomban'izy ireo mazava tsara sy ny fepetrany sy ny soso-kevitr'izy ireo. Ao amin'ity lahatsoratra SEO ity dia hisy fomba hafa hahafantarana ny fomba fiasan'ireto asa roa ireto. Ankoatra izany, misy ny famaritana ny tranga tsirairay.
Word Framework Framework: Ny rindrambaiko WordPress dia mety ho iray amin'ny zavatra roa:
Ankoatra ny loha-hevitra amin'izao fotoana izao izay afaka hanamora ny fampivoarana ny loha-hevitra na kodeksa amin'ny endriny iray amin'ny loha-hevitra iray izay afaka manampy amin'ny lohahevitra iray hafa hanatanterahana ny asany samihafa, na ho ampiasaina ho endrika template hafa.)
Fitaizana ankizy iray: Tsy feno ity lohahevitra ity, toy ny foto-kevitra momba ny ray aman-dreny. Ao amin'ny lohahevitra iray momba ny ankizy, dia tsy maintsy misy lohahevitra momba ny ray aman-dreny izay manatanteraka ny asan'ny tranonkala. Ankoatr'izay, dia manampy amin'ny fanatsarana sy ny interface izany, izay tsy miova rehefa manavao ny lohahevitry ny ray aman-dreny.
Mba hahafahanao mifehy ny vaovao farany momba ny lohahevitra, dia tokony hianatra ny fomba fiasan'ny raiamandreninao ianao. Amin'ny toe-javatra sasany, ireo mpanoratra mpanoratra WordPress dia mamela ny famoahana ny vaovao farany amin'ny lohahevitra. Amin'ireo tranga ireo dia mety mila lohahevitra ankizikely izay mbola miasa ao amin'ny fanavaozana ianao. Tadidio fa rehefa fanavaozana ny loha-hevitra dia miova ny rakitra matoanteniny. Mety mila foto-kevitry ny zaza azo antoka ianao mba hahafahanao mitazona izany fiovana izany.
Tsy mitovy amin'ny fanavaozam-baovao ny rafitra. Na izany aza, ny rafitra fanehoan-kevitra dia maneho ny tranokala momba ny fampandrosoana. Miasa mba hampidirina ho lohahevitra samihafa izy io, fa tsy ampiasaina ho loha-hevitra ihany. Ny lohahevitry ny ray aman-dreny WordPress dia afaka miasa "tsy ao anaty boaty", fa ny rafitra ifarimbonana dia mety mila foto-kevitry ny ankizy ho asa feno. Azo atao ny mampiasa ny WordPress plugin amin'ny lohahevitra iray izay feno Source .